🥇 ▷ Sagaalka adeeg bixiyeyaasha e-mail ee ugu ammaansan ✅
Sagaalka adeeg bixiyeyaasha e-mail ee ugu ammaansan
Waxa ka dhigaya ProtonMail doorashadeena koowaad ma aha oo keliya amniga uu adeeggu siinayo adeegsadeyaasheeda, laakiin awood u leh in si dhakhso leh loo maareeyo adeegyada loona hubiyo in adeegyadaasi ay ka badbaadaan basaasiinta. ProtonMail wuxuu ku saleysan yahay xarun amni oo ku taal Switzerland, oo ay soo saareen aqoonyahanno ka socda CERN iyo MIT. Adeeggan waxaa la bilaabay 2013 si dib loogu eego dib-u-eegista, kaliya maaha arrimaha sirta iyo arrimaha amniga, laakiin sidoo kale fududeynta isticmaalka. Samaynta koonto ProtonMail waxay u fududdahay inaad cinwaan email ah la dhigto Gmail ama Muuqaal, laakiin waxay ka duwan tahay barxadaas, ProtonMail wuxuu dhisaa nabadgelyo ku dheehantahay kahortaga isticmaaleyaasha xaasidka ah iyo indhaha oo indhaha.
Marka laga hadlayo amniga iyo adeegga, tani waa tan ka dhigaysa ProtonMail mid aad u xoog badan: Adeeggan wuxuu leeyahay sijinta dhamaadka-dhamaadka-dhamaadka, waa wax inta badan laga maqlo VPN-yada iyo barnaamijyada fariimaha gaarka loo leeyahay sida Signal. Tan macnaheedu waa in farriin kasta oo aad ka soo dirto koontadaada ProtonMail waa la ilaalinayaa laga bilaabo daqiiqadda aad riixdo batoonka dirista illaa daqiiqadda ay farriinta fureyso, waxaana arki kara oo keliya cidda soo dirta iyo aqbaarta. Marka farriin lagu kaydiyo kombuyuutarrada khaaska ah ee ProtonMail, kaliya soo diraha, oo ka kooban furaha dadweynaha, iyo qaataha, oo leh fure furaha ah, ayaa akhrin kara farriinta. Xitaa ProtonMail ma akhrin karto farriimaha, xitaa haddii ereyadoodu ku nool yihiin server-keeda. Xaqiiqdii, ProtonMail wuxuu ballanqaadayaa inaysan xisaabi karin akhbaartaada, maxaa yeelay qaab dhismeedka eberkoodu waxay ka dhigayaan wax aan macquul aheyn in la jaro fariimaha ku kaydsan serverkaaga.
Dabcan, encry-end-to-dhamaadka sifiican ayuu u shaqeynayaa oo keliya haddii aad emayl u dirto isticmaaleyaasha kale ee ProtonMail. Sababtaas darteed, ProtonMail wuxuu kaloo taageerayaa in loo diro emaylka isticmaaleyaasha kale ee aan ahayn ProtonMail, iyadoo bixineysa isla nooc sir ah oo aad ka fileyso adeegyadooda. Tan waxaa ku jira bixiyeyaasha emaylka sida Gmail, Yahoo! Boostada, Muuqaalka, Apple Mail, iyo xitaa AOL Mail. Isticmaalahan ayaa heli doona xiriirin qarsoodi ah bedelka e-maylka, kaas oo ay ku duubi karaan iyagoo adeegsanaya passphrase-ka aad si gaar ah ula wadaageysid. Dabcan sidoo kale waxaad sidoo kale u diri kartaa emayl aan qarsoonayn adeegsigan sidoo kale. Sidii aan soo sheegnay, ProtonMail wuxuu diiradda saarayaa hubinta in adeegyadiisu ay fududahay in loo isticmaalo qof kasta. Ma jiro wax softiweer ah oo lagu rakibi karo kombuyuutarkaaga, ma jiro fure sirta ah oo lagu raaco, mana jiro nidaam adag oo dejinta ah. Intaa waxaa sii dheer, ProtonMail wuxuu bixiyaa dalabyo loogu talagalay Android iyo macruufka, labadaba si wanaagsan ayey u aqbalaan isticmaaleyaasha.
ProtonMail wuxuu ujro lacag la’aan ah u siiyaa dadka isticmaala inay isqortaan oo adeegsadaan, una oggolaadaan adeegsadaha inuu isqorto oo adeegsado adeegyada khadka tooska ah. Tani waxay ku siinaysaa 500 megabytes oo kaydinta internetka ah, cinwaan e-mayl ah, ilaa 150 farriimo ah oo la diro maalin kasta, xaddidan macmiil, iyo illaa saddex magac ama fayl. Isticmaalayaasha badankood waxay rabaan inay adeegsadaan xirmada Plus, oo bixiya khibrad isticmaal badan oo dabacsan. Wixii $ 5 bishii ah ama $ 48 sanadkii, rukumada Plus ayaa ku siinaysa astaamo badan oo dheeri ah, oo ay kujirto awoodda lagu diri karo illaa 1000 farriin maalintii, kaydiso illaa 5 GB xogta ku saleysan daruuriga, keydso 200 fayl ama sumadaha sumadda, khibrad. caadi ahaan u taageer ProtonMail oo isticmaal miirayaasha emailka iyo jawaabayaasha.
Dhanka kale, shirkaduhu waxay rabaan inay dib u eegaan buugga ‘Professional’, kaas oo bixiya ilaa 50 isticmaale awood u leh inay ku keydiyaan 5 GB xogta midkiiba, u diro farriimo aan xadidneyn, kaydiso faylalka aan xadidnayn, oo leh astaamaha taageerada khadka mudnaanta leh. Waxaa jira qorshe heer sare ah, oo si ku-habboon loogu magacdaray Qorshe Himilo, oo loogu talagalay kuwa diyaar u ah inay iska bixiyaan khibradda ugu wanaagsan ee ay tahay in ay bixiso Proton. Muddo $ 30 bil ah ama $ 288 sanadkii, waxaad heli doontaa cinwaanno emayl ah lix isticmaale oo kala duwan, 20GB oo keyd ah oo kayd ah, fariin aan xadidneyn, oo ay ku jiraan ProtonVPN si aad uga dhigto isticmaalka internet-ka mid aamin ah oo asturan.
Guud ahaan, isticmaaleyaasha badankood ee raadinaya cinwaanno ammaan ah ama cinwaanno shakhsi ah waxay ka heli doonaan waxyaabo badan oo ay jecel yihiin ProtonMail. Qaabeynta waa mid fudud, xitaa si fudud ayaa loo adeegsan karaa wuxuuna leeyahay amniga ugu wanaagsan ee aan ku aragnay emayl shaqsiyeed. Naqshadeynta muuqaalka ayaa ah mid casri ah oo nadiif ah, iyadoo diiradda la saarayo sidii loo badbaadin lahaa iyada oo aan laga badin naqshada muuqaalka ah ee ka dhigaysa Gmail ama Muuqaalka mid caan ah. Muhiimadda ay leedahay in loo diro farriimaha sirta ah adeegyada aan qarsoodi ahayn lama qiyaasi karo, iyo khidmadda bilaashka ah ee ku filan oo ay ku filnaan karto odayaasha inay aaminaan. Dhanka kale, Tier Plus wuxuu u fiican yahay adeegsadayaasha doonaya inay ku qaataan emaylkooda heerka xiga, iyo xulashooyinka xirfadleyda iyo kooxdu waxay ka dhigayaan doorashada saxda ah qof kasta oo raadinaya adeeg email tayo leh oo aan la wadaagin, shaandhayn ama iibin xogtaada. . Haddii aad raadinayso hal-size-ku habboon-dhammaan xirmo loogu talagalay emayllada qarsoon, ProtonMail ayaa adiga ikhtiyaar kuu ah.